ငပျင်းလေးတွေမှာ ဒီလိုထူးခြားစွမ်းရည်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်ရော… – Trend.com.mm
ဘယ့်နှယ် ပျင်းပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်လိုထူးခြားစွမ်းရည်တွေကရှိဦးမှာတုန်းလို့တော့ အပြစ်တင်မစောပါနဲ့။ ပျင်းတာကိုကထူးခြားစွမ်းရည်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ငပျင်းချင်းပြိုင်ဘယ်သူနိုင်ဆိုပြီးတော့တောင် အပျင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုအနုိုင်လုပြလိုက်ချင်သေးရဲ့ ..ဘယ်သူကိုယ့်လောက်ပျင်းမလဲပေါ့လေ။ သာမန်သူလိုကိုယ်လိုလူတွေမှာမရှိတဲ့ စွမ်းရည်တွေက ငပျင်းလေးတွေမှာ ကိန်းအောင်းလို့နေပါတယ်။အဲဒါတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆုိုရင်….
ဖြတ်ထိုးညဏ်ကတော့ ကောင်းမှဖြစ်မယ်လေ။နို့မဟုတ်ရင်ဘယ်ပျင်းလို့ရတော့မလဲ ဟုတ်တယ်မလား။ အထာကျကျပျင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် ပျင်းပျင်းနဲ့ထိုင်နေရင်းနဲ့ကို အခြေအနေတစ်ရပ်လုံးကိုကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး လူအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတာကိုအမြဲလိုလိုကြံဆနေရတော့မှာ။ အဲဒီလိုကြံဆနေလာရင်းနဲ့ နဂိုကသိပ်ပြီးညဏ်မပြေးသူတွေတောင် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်မထိခိုက်ပဲ အေးအေးလူလူစိတ်ချလက်ချပျင်းလို့ရအောင် ကြိုးစားရင်းဖြတ်ထိုးညဏ်တွေစူးရှထက်မြက်လာကြတော့တာပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ပျင်းတယ်ဆိုတာအပြင်လူတွေကြည့်ရင်အလကားထိုင်နေသလိုလိုဘာလိုလိုဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းက ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါင်းမြောက်များစွာလှည့်ပတ်စီးဆင်းနေတာပါ။ သူ့ဘာသာဝင်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့အတွေးတွေရှိမယ်။ ကိုယ်ကလိုလိုချင်ချင်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွေးတွေရှိမယ်။မမြင်ချင်လို့ပိတ်ထားရင်းနဲ့ကိုမှ အတင်းဝင်လာတဲ့အတွေးတွေကိုတိုက်ထုတ်နေရတာရှိမယ်။ အဲဒီလိုလှည့်ပတ်သွားလာနေတဲ့အရောင်စုံတဲ့အတွေးတွေကိုိ ထိုင်ကြည့်နေရင်း ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်နိုင်မယ့်အတွေးလေးတွေကိုမထင်မှတ်ပဲကောက်ယူသိမ်းဆည်းမိလိုက်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့။ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ ခရုခွံကောက်ရင်းနဲ့ ပုလဲလုံးတို့ဘာတို့ကောက်ရလိုက်သလိုပဲလေ။ ထိုင်ပြီးပျင်းနေတဲ့သူလေးတွေမှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ပျင်းနေမိသူတွေက လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မပါပဲ အတွေးကမ္ဘာထဲကိုမကြာခဏအလည်အပတ်ရောက်လေ့ရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့် တွေးရင်းတောရင်းနဲ့ အသစ်အသစ်တွေကြံစည်စိတ်ကူးမိပြီး အဲဒီအကြံအစည်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့အခါ အခြားသူတွေရင်သပ်ရှု့မောရလောက်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ကဗျာ၊စာပေလိုအရာတွေနဲ့အကျိုးပေးသူတွေပေါ့။ (တော်ကြာ ကဗျာဆရာတွေအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းဆော်ပလော်တီးတာခံနေရဦးမယ်.. ကဗျာဆရာတိုင်း ပျင်းကြတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်)
ပျင်းတဲ့သူတွေက စကားပြောရမှာတောင်ပျင်းတယ်ဆိုပြီးငြိမ်နေတာအကောင်းမမှတ်ပါနဲ့နော်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကန့်သတ်ထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အခြားသူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကို သတိပြုမိသလိုဖြစ်စေပြီး ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုဆိုတာအချိန်တိုအတွင်းအကဲခတ်နိုင်သူလေးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ဘယ်သူကတော့သူတို့ပျင်းနေတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့သိသလို ပျင်းတဲ့သူအချင်းချင်းဆိုရင်လည်း ဟန်တွေပန်တွေထားမနေပဲ သူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွေ့လွေ့ဆိုသလို အင်မတန်ခင်မင်တတ်ကြသူလေးတွေပါ။
သူတို့အတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ပျင်းမြဲအတိုင်းပျင်းနေချင်တဲ့ အင်နားရှားစွမ်းအင်ကိုကန့်လန့်ခံပြီး တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဟာ တကယ့်ကို စွန့်စားမှုကြီးတစ်ရပ်ပါ။ဒါကြောင့် လူတွေကစွန့်စားမှုမလုပ်ခင်အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုသုံးသပ်ကြသလိုပဲသူတို့လည်း စွန့်စားမှုမပြုလုပ်ခင် အခြေအနေကိုထောင့်စေ့အောင်သုံးသပ်တတ်ကြပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ပျင်းရတာဇိမ်ပျက်တာကိုး။ ဒီတော့ သူတို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာမှန်ကန်တာများသလို သူတို့က တစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း မမှိတ်မမသုန် တစ်ဆံခြည်မရွေ့အကောင်အထည်ဖော်တတ်ကြသူလေးတွေပါ။
ဒါတွေကတော့ ငပျင်းလေးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်လေးတွေကို ဖောက်သည်ချထားတာပါ။မပျင်းတဲ့သူတွေကတော့ နားလည်ဖို့ခက်မှာပေါ့လေ။ အဲ့လယ်… အထာကျကျဆက်ပျင်းကြမယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ ပျင်းတဲ့သူလေးတွေရှိရင်လည်း Mention ခေါ်ပြီး ပြလိုက်ပါဦး။ပျင်းကြသူအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကောင်းပါတယ်။
ပျင်းတဲ့အရာမှာ သရဖူဆောင်းပါတဲ့ ငပျင်းထိပ်ခေါင် Admin ချောချောလေး
ဘယြ့နှယြ ပငြွးပါတယဆြိုမှ ဘယလြိုထူးခှားစှမြးရညတြှကရှေိဦးမှာတုနြးလို့တော့ အပှစတြငမြစောပါနဲ့။ ပငြွးတာကိုကထူးခှားစှမြးရညတြစခြုပဲမဟုတလြား။ငပငြွးခငြွးပှိုငဘြယသြူနိုငဆြိုပှီးတော့တောငြ အပငြွးပှိုငပြှဲကှီးကိုအနုိုငလြုပှလိုကခြငွသြေးရဲ့ ..ဘယသြူကိုယြ့လောကပြငြွးမလဲပေါ့လေ။ သာမနသြူလိုကိုယလြိုလူတှမှောမရှိတဲ့ စှမြးရညတြှကေ ငပငြွးလေးတှမှော ကိနြးအောငြးလို့နပေါတယြ။အဲဒါတှကေ ဘာတှမွေားဖှစမြလဲဆုိုရငြ….
ဖှတထြိုးညဏကြတော့ ကောငြးမှဖှစမြယလြေ။နို့မဟုတရြငဘြယပြငြွးလို့ရတော့မလဲ ဟုတတြယမြလား။ အထာကကွပွငြွးနိုငဖြို့ဆိုရငြ ပငြွးပငြွးနဲ့ထိုငနြရငြေးနဲ့ကို အခှအနေတစေရြပလြုံးကိုကှောငြးကွိုးဆငခြှငဝြဖနေပြိုငြးခှားပှီး လူအသကသြာဆုံးဖှစအြောငဘြယလြိုလုပရြငရြမလဲဆိုတာကိုအမှဲလိုလိုကှံဆနရတေော့မှာ။ အဲဒီလိုကှံဆနလောရငြးနဲ့ နဂိုကသိပပြှီးညဏမြပှေးသူတှတေောငြ ကိုယြ့အတှကကြိုယမြထိခိုကပြဲ အေးအေးလူလူစိတခြလွကခြပွငြွးလို့ရအောငြ ကှိုးစားရငြးဖှတထြိုးညဏတြှစေူးရှထကမြှကလြာကှတော့တာပါပဲ။
ဟုတပြါတယြ။ပငြွးတယဆြိုတာအပှငလြူတှကှညြေ့ရငအြလကားထိုငနြသလေိုလိုဘာလိုလိုဆိုပမယြေ့ တကယတြမြးက ခေါငြးထဲမှာအတှေးပေါငြးမှောကမြွားစှာလှညြ့ပတစြီးဆငြးနတောပါ။ သူ့ဘာသာဝငလြာပှီးပှနထြှကသြှားတဲ့အတှေးတှရှေိမယြ။ ကိုယကြလိုလိုခငွခြငွဖြိတခြေါထြားတဲ့အတှေးတှရှေိမယြ။မမှငခြငွလြို့ပိတထြားရငြးနဲ့ကိုမှ အတငြးဝငလြာတဲ့အတှေးတှကေိုတိုကထြုတနြရတောရှိမယြ။ အဲဒီလိုလှညြ့ပတသြှားလာနတေဲ့အရောငစြုံတဲ့အတှေးတှကေို ထိုငကြှညြ့နရငြေး ကိုယြ့အတှကအြသုံးဝငနြိုငမြယြ့အတှေးလေးတှကေိုမထငမြှတပြဲကောကယြူသိမြးဆညြးမိလိုကတြာတှလညြေးရှိတာပေါ့။ ပငလြယကြမြးစပမြှာ ခရုခှံကောကရြငြးနဲ့ ပုလဲလုံးတို့ဘာတို့ကောကရြလိုကသြလိုပဲလေ။ ထိုငပြှီးပငြွးနတေဲ့သူလေးတှမှော အတှေးအခေါကြောငြးတှရှေိတတပြါတယြ။
တစနြတေ့စနြပေ့ငြွးနမေိသူတှကေ လုပနြရတေဲ့အလုပကြိုစိတမြပါပဲ အတှေးကမျဘာထဲကိုမကှာခဏအလညအြပတရြောကလြရှေိ့သူတှဖှစေတြာကှောငြ့ တှေးရငြးတောရငြးနဲ့ အသစအြသစတြှကှေံစညစြိတကြူးမိပှီး အဲဒီအကှံအစညတြှကေိုအကောငအြထညဖြောလြိုကတြဲ့အခါ အခှားသူတှရငေသြပရြှု့မောရလောကတြဲ့အရာတှကေိုဖနတြီးနိုငသြူတှလညြေးဖှစကြှပါတယြ။ ကဗွာ၊စာပလေိုအရာတှနေဲ့အကွိုးပေးသူတှပေေါ့။ (တောကြှာ ကဗွာဆရာတှအေုပစြုလိုကဝြိုငြးဆောပြလောတြီးတာခံနရဦေးမယြ.. ကဗွာဆရာတိုငြး ပငြွးကှတယလြို့မဆိုလိုပါဘူးနြော)
ပငြွးတဲ့သူတှကေ စကားပှောရမှာတောငပြငြွးတယဆြိုပှီးငှိမနြတောအကောငြးမမှတပြါနဲ့နြော။ သူတို့က သူတို့ရဲ့လှုပရြှားမှုတှကေိုကနြ့သတထြားလိုကခြှငြးအားဖှငြ့ အခှားသူတှရေဲ့အပှုအမူတှကေို သတိပှုမိသလိုဖှစစြပှေီး ဘယသြူကတော့ဘယလြိုဆိုတာအခွိနတြိုအတှငြးအကဲခတနြိုငသြူလေးတှလညြေးဖှစကြှပါတယြ။ဘယသြူကတော့သူတို့ပငြွးနတောကိုမကှိုကဘြူးလဲဆိုတာကိုလညြးတစခြကွကြှညြ့လိုကရြုံနဲ့သိသလို ပငြွးတဲ့သူအခငြွးခငြွးဆိုရငလြညြး ဟနတြှပနေတြှထေားမနပေဲ သူတောခြငြွးခငြွးသတငြးလှလှေ့ဆေို့သလို အငမြတနခြငမြငတြတကြှသူလေးတှပေါ။
သူတို့အတှကတြော့ သူတို့ရဲ့ပငြွးမှဲအတိုငြးပငြွးနခငွေတြဲ့ အငနြားရှားစှမြးအငကြိုကနြ့လနြ့ခံပှီး တစစြုံတစခြုလုပဖြို့ဆုံးဖှတရြခှငြးဟာ တကယြ့ကို စှနြ့စားမှုကှီးတစရြပပြါ။ဒါကှောငြ့ လူတှကစှေနြ့စားမှုမလုပခြငအြခှအနေအရေပရြပကြိုသုံးသပကြှသလိုပဲသူတို့လညြး စှနြ့စားမှုမပှုလုပခြငြ အခှအနေကေိုထောငြ့စအေ့ောငသြုံးသပတြတကြှပါတယြ။ မဟုတရြငပြငြွးရတာဇိမပြကွတြာကိုး။ ဒီတော့ သူတို့ခမွှတလြိုကတြဲ့ဆုံးဖှတခြကွတြိုငြးဟာမှနကြနတြာမွားသလို သူတို့က တစခြုခုကိုဆုံးဖှတပြှီးပှီဆိုရငလြညြး မမှိတမြမသုနြ တစဆြံခှညမြရှအေ့ကောငအြထညဖြောတြတကြှသူလေးတှပေါ။
ဒါတှကတေော့ ငပငြွးလေးတှရေဲ့ ထူးခှားတဲ့စှမြးအငလြေးတှကေို ဖောကသြညခြထွားတာပါ။မပငြွးတဲ့သူတှကတေော့ နားလညဖြို့ခကမြှာပေါ့လေ။ အဲ့လယြ… အထာကကွဆွကပြငြွးကှမယြ။ ကိုယြ့လိုပဲ ပငြွးတဲ့သူလေးတှရှေိရငလြညြး Mention ခေါပြှီး ပှလိုကပြါဦး။ပငြွးကှသူအခငြွးခငြွးရိုငြးပငြးကောငြးပါတယြ။
ပငြွးတဲ့အရာမှာ သရဖူဆောငြးပါတဲ့ ငပငြွးထိပခြေါငြ Admin ခွောခွောလေး